Madaxweynaha Puntland oo maanta xariga ka jiray Saldhiga Booliska Gobolka Mudug (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas oo maalmahaanba booqasho ku joogay Magaalada Galkacyo, ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray Saldhiga Booliska Gobolka Mudug.
Xafladda xariga looga jaraayay, ayaa lagu qabtay Saldhiga, waxaana gaba gabada Dhismaha Saldhiga lagu soo beegay, mudada uu Madaxweynuhu uu booqashada ku jooggo Gobolka.
Madaxweynaha, ayaa waxaa la arkaayay isagoo kormeer ku samaynaaya qaybaha uu ka kooban yahay Saldhiga, wuxuuna sheegay mid qayb ka qaadan kara xasiloonida Gobolka, mustaqbalka dhow.
Madaxweynaha waxa uu mahadcelin u jeediyay dhammaan cidii gacanta ka gaysatay, sidii loo hirgelin lahaa Saldhigaasi, si loogu xaqiijiyo amniga Deegaanka.
C/weli Maxamed Cali Gaas, ayaa Saraakiisha Booliska kula dardaarmay inay ilaaliyan nadaafadda Saldhiga iyo nidaamka shaqo. Isagoo Booliska ku sheegay ilaaliyaha Sharciga.
Tani waxay qayb ka tahay tallaabooyinka ay Puntland ku doonayso inay ku adkayso ammaanka Waqooyiga Magaalada Galkacyo.